Bursa'ya, Tramvaylı dönemle 23 noktada lamba! | RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBursa, လမ်းရထား 23 ကာလအတွက်အချက်နှင့်ဆီမီးခွက်!
Bursa, လမ်းရထား 23 ကာလအတွက်အချက်နှင့်ဆီမီးခွက်!
11 / 09 / 2013 16 Bursa, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား
Bursa, လမ်းရထား 23 ကာလအတွက်အချက်နှင့်ဆီမီးခွက်! ဓါတ်ရထားကာလ, Bursa အတွက်နေ့စဉ်အသက်တာ၏သံသရာ, ၎င်းတို့၏အလေ့အထများနှင့်ဦးစားပေးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
ray အဖြစ် ...
မော်တော်ယာဉ်အသွားအလာစီးဆင်းမှုအတွက်Altıparmakလမ်း, အားလုံးအတွက် output ကို, ထိုဆင်းသက်တစ်ခုတည်းလမ်းသွားအကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။
မြို့ရင်ပြင်, ကြိုငျးဦးတည်ချက်ကိုင်တွယ်ရန်တလမ်းတည်းအတူနှံကောင်ရောင်အကြားအဓိက link ကိုဖြစ်သောဗုဒ္ဓဟူးနေ့လမ်း, ။
ပင်အသွားအလာအလင်းအိမ်အဖြစ်အသစ်သော applications များမှတ်, ပြန်တမ်းပါလိမ့်မည်။
စုစုပေါင်း 23 အမှတ်!
မီးခွက်, 8 အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မီးခွက်ကို install လုပ်ဖို့ပိုပြီး 15 အချက်။
အသစ်အစက်အပြောက်လမ်းရထားဖွငျ့လုပ်ငန်းများ၌ပါလိမ့်မည်။ အကူးအပြောင်းအချိန်လေးအတွင်းမှာတော့အနီရောင်အလင်းယာဉ်များရပ်တန့်လိမ့်မည်။ အနီရောင်အလင်းမီနှင့်ပြီးနောက်, မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သတိပေးတည်နေရာနှင့်အတူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါလည်ပတ်ချိတ်ဆက်ရန်လိုခငျြတဲ့သူ Ataturk Square ကိုလမ်းကနေŞehreküstüကိုရွှေကြိုက်တတ်တဲ့တံတားမှာရပ်တန့်လိမ့်မည်။ အကြှနျုပျ၏အဆုံးတံတားကြိုက်တတ်တဲ့သူများသည်, အလမ်းရထားအနီရောင်အလင်းရပ်တန့်လိမ့်မည်, တီထွင်မည်ဖြစ်သည်။
Atatürk Caddesi မှာပြန်လာနိုင်ရန်ပြည်နယ်ဆေးရုံ, Maksem Street Journal နှင့်SetbaşıÇakırhamam ...
သမ္မတနိုင်ငံရင်ပြင် Interchange ကနေ Demirtas Setbaşı, လျှပ်စစ်ပြက်သို့လှည့်နှင့်လင့်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ...
လမ်းလမ်း ... နှံကောင်ရောင်အဆိုပါ Uluyol,4မြို့ရင်ပြင်လမ်းပေါ်ဆက်သွယ်မှုကနေမြေပြင်ကိုပြန်လာ ... ...
Bursa အသွားအလာ, နေ့ညမီးရှို့ဖျက်ဆီး!
ရင်းမြစ်: Serkan İNCEOĞLU - www.bursahakimiyet.com.t ဖြစ်ပါသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Led အလင်းပြန်မှုမီးအိမ် Buy ပါလိမ့်မယ်
Kayseri Transportation Inc. မှကျောင်းသားများအတွက်5နေရာတွင်
Ankara ရှိ Metro နှင့် Ankaray Stations များပါဝင်သည်။9သီးခြား။
“ Park Continue” လျှောက်လွှာကို Istanbul ရှိ 44 အမှတ်…
Izmir '' ပထမဦးဆုံးခြေမ '' သတိပေးချက်ထဲမှာ 170 အမှတ်
Yılmaz, Samsun Service ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်သားများİş
Izmir မှ Tram နှင့်အတူရင်ပြင်
အလင်းကိုလုပ်ငန်းသုံးယဉ် Collider3လမ်းရထား Konya ဒဏ်ရာရခဲ့သည်
အဆိုပါလမ်းရထားသင်၏ Way ကိုရပ် Continue
Trabzon လမ်းရထား MMO Related ထုတ်ဖော်ထံမှမှတ်သားလောက်
Silkworm အဆိုပါလမ်းရထားလာ ... ဒန်ဒန်, dan ... လမ်းထဲက